Urruradda shaqaalaha oo isku raacay hab lugu shaqaaleeysiinaayo soo galootiga | Somaliska
Urruradda ugu waa weeyn xagga shaqaalaha dalkaan Iswiidhan, ayaa soo dhaweeyey hindise la xirriirta guno iyo kabitaan la siiyo dadyowga shaqo la’aanta heeysa ee dalka ku cusub.
Unionen oo ah urrur shaqaale oo degmooyinka ah ayaa sheegey in ay hadda laga munaaqishoonayo sida fudud ee loo shaqaaleysiin karo soo galootiga ee dhawaan soo galey, hindisahan ayaa waxaa soo bandhigay hey’adda shaqabixiyayaasha ee shirkadaha tiknaloojiyadda.
” Waxaan diyaar u nahay in aan ka qeyb qaadano doodan mana jirto diidmo aan ka hor keeno lana arki doono” ayuu yiri Tobias Baudin oo ah madaxa ururka shaqaalaha degmooyinka. Dooda moowducan ayaa haatan waxaa u fadhiya oo ka munaaqishoonaya urrurada Tiknikada, IF Metal, urrurada shaqaalaha ee degmooyinka iyo Unionen.Doodan ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah shirkadii shaqaaleeysiisa qof ka mid ah soo galootiga la siinayo sideed kun oo karoon halka ay dowladdana ay siineeyso lacag kale oo la mid ah sideedaas kun.
Dhinaca kale wasiiradda shaqada Ylva Johansson, ayaa horey u dhaleeyceeysay badan shirkadaha kuwaas oo ay ku tilmaantay in ay ka gaabiyeen shaqaaleysiinta soo galootiga, islamarkaasina aad u soo dhaweeysay hindisahan lugu doonayo in dhinaca shaqada iyo kaalmo dhaqaale la siiyo soo galootiga si ay uga mid noqdaan suuqa shaqadda, balse aan balan qaad arrinkaas ka sameeyn.
“Waan eegeeynaa dabcan hindisahan diyaarsan, dawladduna waxeey diyaar u tahay in ay ggacan ka geeysato .Waana arrin mudan in wax kasta laga hormariyaa kolka dhinacyada hawshaan ka qeyb qaadanayaa ay diyaar yihiin, dawladduna diyaar ay dhankeeda diyaar u tahay howshaan” ayeey tiri Sweden Ylva Johansson oo ah wasiiradda shaqadda Iswiidhan oo warameeysay idaacadda Ekot.
“Waxaad u baahantahay waasto”